Afrika Miyay Ka Adkaatay COVID-19? Qalinkii Ibraahin-Hawd Yuusuf | Hayaan News
Afrika Miyay Ka Adkaatay COVID-19? Qalinkii Ibraahin-Hawd Yuusuf
Maqaal ay maanta daabacday barta Aljazeera ayaa ciwaan loo ga dhigay “Mucjisada Afrika… Maxaa Diiday COVID-19 in uu gumaado dadka qaaradda madow?” Maqaalku wax uu si faahfaahsan u dabo galay bilow ilaa dhammaad duruufaha iyo waayaha qaaradda ee cudurkan iyo sida ay saadaashii xumayd oo dhami u beenowday. Sannadkan bilowgiisii kolkii fayraska Corona caalamka soo weeraray judhiiba waxaa soo baxay oddorosyo badan oo wada niyad xun oo ku saabsan halista qaaradda ku soo fool leh, oddorosyadaa wada foosha xun oo ay hormuud ka ahayd Hay’adda Caafimaadka ee QM (WHO). WHO wax ay sii saadaalisay dadka qaaradda ee tiradoodu tahay hal bilyan iyo 350 milyan in sannadka kowaadba rubuc ka mid ah fayrasku asiibi doono, halka ay 200 oo kun u dhiman doonaan. Gabadh ka mid ahayd dadkii Afrika wax ka sii qoray wax ay saadisay “in maydku waddooyinka daadsanaan doono”.
Hayeeshee runtu wax ay noqotay kolkii bukaankii kowaad ee COVID-19 qaaradda la ga helay dalka Masar badhtamihii bishii Feebarweri ilaa goortan oo xaaladdii adkayd la ga gudbay, Afrika wax ay noqotay mucjisada dunida marka loo eego qaaradaha kale. Ilaa maanta dadka qaaradda cudurka waxaa u soo dhacay malyuun iyo nus keliya, halka Hindiya oo Afrika la tiro ah ay soo dhaceen in ka badan 6 milyan oo qof, iyada oo Hindiya imika maalin walba ay u soo dhacaan 80 kun halka Afrika tahay 8 kun. Qaaradda Afrika oo dhan waxaa cudurkan u dhintay 35 kun oo qof [Maraykanka oo Afrika afar jeer ka tiro yar dhimashadu wax ay ku dhow dahay 200 oo kun].